Nokho, ubani phakathi kwethu akawuthandi inyama? Ngiyaqiniseka ukuthi abafundi abaningi abathandi inyama izitsha, ngakho Ungadliwa yesibili izitsha inyama nesithakazelo cishe wonke umuntu.
Ukuze ukulungiselela isidlo inyama, udinga ukukhetha inyama kwesokudla, akunandaba, kungcono iwundlu, ingulube noma yenkomo, noma mhlawumbe wenze inyama yezilwane "exotic" (ngiqonde inyama izingulube zasendle, amaphiva, njll). Nokho, uma uhlala emaphandleni wenze ukukhulisa livestock inyama.
Okokuqala, akufanele ukuba useyanuka, kuhle, iyiphi inyama fresh cishe akukho iphunga (ngaphandle kungenzeka inyama yezimvu, Izinkunzi, izimbuzi - banayo iphunga eyinqaba). Okwesibili, sinake umbala inyama, ingulube kuhle kamnandi, yenkomo - ebomvu anemibala onsomi, iwundlu - umbala isitini-bomvu. Futhi, okwesithathu, cindezela phansi inyama - a isifaca, eyasungulwa ngenxa ngokucindezela umunwe, kufanele bayozama. Lezi amathiphu alula kuzosiza ukhetha ngokudlulisa ukuze senze zokupheka ngoba izifundo main kwenyama e real okwehla esiphundu.
Into yokuqala eyafika ikhanda lami - amadombolo nge inyama namazambane. Manty zifana kakhulu amadombolo, kodwa ukulungiselela ambalwa. Othile uyathanda ivaliwe imisebe Manta, Ngiyakuthanda ukupheka evulekile. Ukuze test sizodinga 1 egg, 100 ml amanzi abilisiwe, umusi inkomishi ufulawa spoon amafutha zemifino kanye nosawoti. Uxove inhlama, njengoba amadombolo - kuphole ukuba kalula ungase ukhiphe. Ngokuvamile, izitsha eziningi eziyinhloko nge inyama ezihilela ukusetshenziswa isivivinyo.
Ukuze ukugcwaliswa, sidinga 3-4 amazambane eluhlaza (uma ufuna pomyasnee, ungasebenzisa amazambane ngaphansi nokuningi emhlabathini yenkomo), 400 amagremu ekhaya nengulube (1/2 of the yenkomo kanye ½ we yengulube), u-anyanisi, usawoti kanye pepper njengoba oyifunayo. Amazambane uthathe cubes ezincane, anyanisi nquma. Zonke okuhlangana ngayo inyama nengulube, usawoti uhlanganise kahle. Thosa ukugxusha akudingekile, kumele kube eluhlaza, ngakho ukunambitheka inyama iyagcinwa kangcono. Khona-ke unikezele ngezinsizakalo inhlama kusukela namanzi maphakathi lo ukugxusha wafaka zaschipyvaem imiphetho ukuze phezulu kwaba imbobo encane. Manty sibekwa ngesitimu noma mantyvarku, ukuphela imizuzu 30 umusi. Lapho amadombolo zilungele, uzihambise ku etafuleni ngempela ashisayo. Mina ngaphezu kwalokho ayoliswe ukhilimu omuncu kanye namakhambi, kuvela ngobuhlanya okumnandi. zokupheka okunjalo neyesibili, inyama zinhle ngoba kunomsoco kakhulu futhi kungaba ukondla wonke umndeni kalula.
Ngokukhethekile ikhokhelwa ukuze onjalo ekusweleni inyama izitsha like inkukhu nge pepper kanye iwayini. ukunambitheka Sound and yokuqala yale isidlo Isimanga. Eqinisweni, iresiphi kuyinto okusikhumbuza a Ragout nge imifino kanye nenyama. Ngakho, ukulungiswa sidinga: iphawundi inkukhu, pepper elimnandi elibomvu, anyanisi ezimbili ezinkulu, umbhangqwana amazambane eluhlaza, utamatisi, u-garlic (clove ngokwanele), omhlophe etafuleni iwayini 100 ml, usawoti, amakhambi nezinongo njengoba oyifunayo.
Inkukhu webele uthathe cubes ezincane, zisakazwa epanini ngamafutha, Fry kancane. Bese wengeza i-anyanisi oqotshiwe kanye pepper, Fry imizuzu embalwa, inkathi ngosawoti kanye isiyaluyalu. Ngokulandelayo, uthele iwayini, kahle ithambisa izingcezu inyama uyomane ancibilike emlonyeni wakho. A sikadali kancane. Khona babeka amazambane lisikiwe futhi utamatisi Diced. Garlic sengezwe izitsha nje phambi ngomumo. Ngokwesilinganiso, ukulungiswa kuthatha cishe ihora. Beka isidlo eseqedile on ipuleti, ukuhlobisa nge zasemazweni amahle ukukhonza.
Ngokuvamile, ukulungiswa izitsha inyama ithatha isikhathi eside kunaleso izitsha nje yemifino, kodwa wokupha futhi esihlwabusayo.
Emhlabeni wonke zokupheka cishe ngeke ukuthole, ngoba wonke amazwe ngisho imindeni - zabo zendabuko zokupheka ukupheka inyama. Yingakho zokupheka izifundo oyinhloko inyama ezihlukahlukene ngakho nesinabantu abaningi, ngifuna ukuzama konke kubo, kodwa ngiyesaba lonke ekuphileni ngoba lokhu kunganele.
Recipe yenkomo kwesibindi pate
Futhi lokho appetizer pepper ebusika oyithandile?
Inkukhu amaphiko uju sauce
Omelette "Poulard": iresiphi ngesithombe
Shpilman Vladislav: wopiyano enkulu nge phetho nzima
St Elmo umlilo - isithombe kanye nohlobo mkhuba ongavamile
Swarovski Namacici - okunethezeka okungabizi
Ukudla yenza i
Yini amazwekazi bahlanza by e-Arctic Ocean? izici zayo
Kanjani emikhombeni ukuze onogwaja ngezandla
Indlela uvule ikhadi Savings Bank? Ukuze siqonde izizathu kanye nemininingwane yokuvala
Kanjani ukwakha izandla zakho ekhaya ngempumelelo enkulu?